ABC Information Technology - ABC Information Technology-ABC Information Technology-Happy 16th Birthday to ABC Info Tech
Sim4crew Balance Check
ABC Information Technology
ABC Project 150
Created: 28 April 2017 | Hits: 2257
What's included? ဘာတွေ ပါဝင်တယ် ဆိုတာ အသေးစိတ် ဖတ်ကြည့်ပါ
ABC Info Tech အနေဖြင့် SME ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် တစ်ထောင့်တစ်နေရာမှ
Your Joomla website will be installed with the most suitable, latest version, of Joomla. This package includes of your custom Joomla template based onadesign concept provided by template artisteer .
2 hours consultancy
Custom Joomla template based onadesign concept provided by template artisteer .
Read more: ABC Project 150
ဘာလဲဟဲ့ iVittamobile 2.0?
Created: 27 February 2018 | Hits: 680
သင်္ဘောသား ဘဝမှာ အဓိက အလိုအပ်ဆုံးက ကိုယ့်ချစ်သူ၊ ခင်သူ၊ မိသားစုနဲ့ အဆက်အသွယ်မပျက်ချင်တာပါပဲ၊ ယနေ့ ခေတ် အချို့ Tanker သင်္ဘောတွေမှာ Internet ဝန်ဆောင်မှု ပေးတာရှိပေမဲ့ အများစုက မပေးနိုင်သေးပါဘူး၊ ဒီတော့ မြန်မာသင်္ဘောသားတွေဟာ ရောက်တဲ့ နိုင်ငံတိုင်းမှာ သင်္ဘောပေါ်လာရောင်းတဲ့ ဈေးနဲ့ တန်တန် မတန်တန် Sim ကဒ်တွေ ဈေးကြီးပေးဝယ်ပြီး အင်တာနက် နဲ့ ဖုန်းအသုံးပြုနေရတာဟာ မလိုအပ်ပဲ ငွေကြေးများစွာကုန်ကျစေပါတယ်။ ဒါတင်ဘယ်ကမလဲ ငွေဖြည်ချင်ပြီဆိုရင် နောက်ထက် ဈေးကြီးကြီးပေးဝယ်လို့ ရရင်တောင် အစဉ်ပြေပါသေးတယ် တချို့ တန်ကာ သင်္ဘောတွေဆိုရင် လူသူမရှိ မြို့နဲ့ အဝေးကြီးတွေမှာ ဆိုက်ကပ် တော့ အတော့ကို အစဉ်မပြေဖြစ်ရပြန်ပါတယ်၊
Read more: ဘာလဲဟဲ့ iVittamobile 2.0?
CCTV တက်ဆင်တော့မယ် ဆိုရင်
Created: 08 November 2016 | Hits: 2278
Professional CCTV Installation Service Just boughtanew CCTV system for your home or business?
Considering buyinganew CCTV system? Make installing CCTV cameras even simpler by using our professional CCTV insallation service. We've teamed up with professional CCTV installer TSG to get you up and running with your new CCTV system even quicker. Whether you need help setting up traditional CCTV cameras, assistance with IP cameras (wifi enabled) or help configuring DVRs (Digital Video Recorders) we can help.
All of our CCTV Installation packages include:
Site assessment by engineer for optimum camera
placement Routing of cables from cameras to power points and back to
The installation ofapre-purchased CCTV kit or individual components from Maplin Configuration of DVR system
Demonstration of basic system operation Where appropriate - one device (eg smartphone or tablet) will be configured for remote CCTV viewing
Call CCTV Installation in Yangon, Myanmar - 09 450012695 or 09260424045
Dahua4Ch with Audio Recorder Package
Created: 06 June 2017 | Hits: 1078
CCTV Dahua Camera4Channel Package With Audio Record Camera ၄လုံးတပ်ရင် ၄လုံးစာ ၊ ၈ လုံးတပ်ရင် ၈ လုံးစာ အသံဖမ်းချင်ပါတယ်ဆိုပြီး Customer များ အမေးများတာကြောင့် အသံဖမ်းစနစ် ၄ခုပါရှိတဲ့4Channel Package နဲ့ အရင်ဆုံး မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ Warranty2Years ပါရှိတဲ့ ကမ္ဘာကျော် Brand တစ်ခုဖြစ်တဲ့
Read more: Dahua4Ch with Audio Recorder Package
CCTV Camera ၄ လုံနှင့် လိုအပ်ပစ္စည်းအစုံပါ
Created: 09 April 2017 | Hits: 1176
HIKVISION Camera 720p Turbo4Unit (3နှစ် အာမခံ )
HiKVISON Receiver 1 Unit (3နှစ် အာမခံ )
Seagate HDD 500 GB
Data Cable 30m
2w Adapter4Unit.
Warranty ကာလ တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ပေးကြောင်း အကြောင်းကြားခြင်း။
Created: 09 May 2017 | Hits: 885
ကျွန်တော်တို့ ABC Info Tech အနေဖြင့် Customer များ ပိုမိုအဆင် ပြေစေရန် ဈေးနှုန်းသက်သာပြီး အရည်အသွေး ကောင်းမွန်သော( HIK Vision ) အမှတ်တံဆိပ် CCTV Camera များနှင့် DVR, NVR စက်များကို သုံးနှစ်အာမခံဖြင့် ရောင်းချပေး နေပါသည်။ လူကြီးမင်း အနေဖြင့် ခိုင်မာမှုရှိသော လုပ်ငန်းနှင့် သာတွဲဖက် လုပ်ကိုင်လိုပြီး Long Time Services အတွက် စိတ်ချချင် သည်ဆိုသော Customer များအတွက်၊ HIK Vision CCTV Camera ( ၃ ) နှစ်အာမခံနှင့် ( ၁ ) နှစ် ပြုပြင်ခြင်း ၀န်ဆာင်မှု အာမခံ ( One Year Service Warranty ) ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ လူကြီးမင်း အနေဖြင့် CCTV တပ်ဆင်လိုသော လူကြီးမင်း၏ အိမ်၊ ဆိုင်၊ စက်ရုံ ... စသည်တို့တွင်လည်း လိုအပ်သည့်အကြံဥာဏ်များ ရယူနိုင်ရန် Survey အခမဲ့ လာရောက် ကြည့်ရှုပေးနေကြောင်း သတင်းကောင်းပါး အပ်ပါသည်။ ဆက်သွယ်ရန် 09450012695 / 09260424045
Happy 16th Birthday to ABC Info Tech
Created: 06 March 2017 | Hits: 1054
ABC Info Tech ရဲ့ 16 နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ CCTV တပ်ဆင်မယ့် Customer များကို အထူး Promotion လေးတစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
Read more: Happy 16th Birthday to ABC Info Tech
HOME | CCTV | FIRE ALARM | WEB | MATV - IPTV | NETWORKING | TRACKER | ABOUT US | CONTACT US